ယုတ္တိဗေဒ: မဟုတ်တဲ့ argument ကဘာလဲ?
ကွာခြားမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့, Command ကနေ Arguments, သတိပေးချက်များ, အကြံပေးချက်များ
နောက်ထပ်သွားမီ, သငျသညျပထမဦးဆုံးဖတ်သင့် သောအရာကိုတစ်ဦးအငြင်းအခုံဖြစ်ပြီး အဘယ်ကြောင့်။ သငျသညျကိုနားလည်ပြီးတာနဲ့သူကတရားဝင်ငြင်းခုံမှုအတွက် Non-အငြင်းအခုံမှားယွင်းဖို့ဝေးလွန်းလွယ်ကူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်အငြင်းပွားမှုများမဟုတ်သည့်အရာအခြို့မှာကြည့်ယူအပေါ်ရွှေ့ဖို့အချိန်ပါပဲ။ ဥပစာ, ဆိုခြင်း, ကောက်ချက် - အငြင်းပွားမှုများ၏အပိုင်းပိုင်း - များသောအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လွယ်ကူပေမည်။ သို့သော်အငြင်းပွားမှုများသူတို့ကိုယ်သူတို့အမြဲဆိုတာတွေ့ရဖို့ဒါမှမလှယျကူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အလွန်မကြာခဏလူတွေကသူတို့ငြင်းခုံနေကြသည်ပေမယ့်မဟုတျပါတောင်းဆိုထားတဲ့အမှုအရာပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
1. တည်ရှိလျက်, သမ်မာကမျြးစစ်မှန်တဲ့ပါ!
ဤအရာအဘယ်သူမျှမငြင်းခုံနေကြသည်; အစား, သူတို့ကအားလုံးဖွင့်အခိုင်အမာရှိပါတယ်။ စပီကာ၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုများ၏ထောက်ခံမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်လျှင်သူတို့ကငြင်းခုံအသွင်ပြောင်းနိုင်ပေမယ့်ပြီးရင်သည်အထိကျနော်တို့အပေါ်သွားကြဖို့အလွန်မရှိဘူး။ သင်ရုံအားကြီးသောအခိုင်အမာရှိသည်တစ်ခုမှာနိမိတ်လက္ခဏာအာမေဍိတ်ရမှတ်များအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ vs. အငြင်းပွားမှုများ
သငျသညျဖြစ်ကောင်းလည်းမကြာခဏကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်သောဘုံ Pseudo-အငြင်းအခုံသို့မဟုတ် Non-အငြင်းအခုံဟာဖြစ်နိုင်ချေအဆိုပြုဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါဥပမာကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ:
4. ကမျြးစာကိုတိကျမှန်ကန်သည်ဆိုပါက, ယရှေုသညျ တစ်ရူးရူးနေတဲ့မုသာကိုသုံးသော, ဒါမှမဟုတ်သညျဘုရားသခငျ၏သားတျောဖြစ်စေခဲ့သည်။
5. သင်စီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေလိုလျှင်, သင်အခွန်ကိုလျှော့ချဖို့ရှိသည်။
6. ကျွန်တော်လျင်မြန်စွာပြုမူဘူးဆိုရငျ, ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုပြင်ကျော်လွန်ပျက်စီးလိမ့်မည်။
ထိုသူအပေါင်းတို့အငြင်းပွားမှုများတူနှင့်ကြောင့်ကြောင်း, အဲဒါကိုသူတို့ကငြင်းခုံခဲ့ကြပါလျှင်အဖြစ်သူတို့ကိုပူဇော်ရရန်အဘို့အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမဟုတျပါ: သူတို့ကလျှင်-ထို့နောက်အမျိုးအစားရိုးရှင်းစွာခြွင်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလျှင်အောက်ပါအဆိုပါအစိတ်အပိုင်းထို့နောက်နောက်ဆက်တွဲဟုခေါ်သည်အောက်ပါ antecedent နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟုခေါ်သည်။
(# 4-6) အထက်ပါသုံးအမှုများကိုအဘယ်သူအားမျှငါတို့သည်ပါမယ်နိဂုံးကိုထောကျပံ့လိုဆိုဝုဏ်အတွင်းတွေ့မြင်ကြဘူး။ သင်ထိုကဲ့သို့တောင်းဆိုမှုများကိုမြင်ရလျှင်စစ်မှန်သောအငြင်းအခုံဖန်တီးရန်ကြိုးစားချင်လျှင်, သင် conditional တွေရဲ့ antecedent အာရုံစိုက်ကြောင့်စစ်မှန်တဲ့အဖြစ်လက်ခံရပါမည်အဘယ်ကြောင့်မေးရန်ရှိသည်။ အကျိုးဆက်များအတွက် antecedent နှင့်အဆိုပြုအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေအကြားမည်သည့်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့သည်လည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
7. ယနေ့အင်္ဂါနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, မနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
8. ယနေ့အင်္ဂါနေ့သည် ဖြစ်. , မနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤအထုတ်ပြန်ချက်များနှစ်ယောက်စလုံးအလားတူစိတ်ကူးများကိုဖော်ပြပေမယ့်ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ပါနေစဉ်ဒုတိယအငြင်းအခုံဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတှငျကြှနျုပျတို့တစ်ဦးလျှင်-ပြီးတော့ခြွင်းချက် (သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်အဖြစ်, တစ်ခါတစ်ရံထို့နောက်ကျဆင်းသွားသည်) ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ယနေ့တကယ်တော့, အင်္ဂါနေ့ကြောင်းအခိုင်အမာခံမဟုတ်သည်ကို ထောက်. စာရေးသူကဆိုဝုဏ်အတွင်းကနေမဆိုအခြစေရန်စာဖတ်သူများကိုတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကအရေးမထားဘူး။
ဖော်ပြချက် # 8 "ယနေ့အင်္ဂါနေ့က" ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးအငြင်းအခုံဖြစ်ပြီးတစ်ဦးလိုက်ဖို့အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လျက်ရှိသည်။ ဤပြောဆိုချက်ကို မှစ. , ကပေါ်မူတည်ပြီးနေပါသည် - ကျနော်တို့ကဒီအခြကိုလက်မခံဖို့တောင်းကြသည် - ကြောင်းမနက်ဖြန်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
9. သင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ရန်သင့်တာဝန်လုပျဆောငျရမညျ , သင့်ဖန်ဆင်းရှင်။
ဤအရာတစုံတခုကိုမျှဖြစ်စေ, ဆင်ခြေများမှာ - တကယ်တော့သူတို့ပင်ဆိုနေကြသည်မဟုတ်။ တစ်ဦးကအဆိုပြုစစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်, တစ်ဦးငြင်းခုံပုအဆိုပြု၏အမှန်တရားတန်ဖိုးကိုတည်ထောင်ရန်ကမ်းလှမ်းတစ်ခုခုပါပဲ။ သို့သော်အထက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များတူမရှိကြပေ။ သူတို့ကပညတ်တို့ကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောမဖွစျနိုငျ - သူတို့သာပညာရှိသသို့မဟုတ်ပညာမဲ့, တရားမျှတသို့မဟုတ်ညျမတရားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
အငြင်းပွားမှုများ vs. ူးပ
အငြင်းအခုံနှင့်အတူတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှုပ်ထွေးကြောင်းတစ်ခုခုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ရှင်းပြချက် ။ အောက်ပါနှစ်ခုထုတ်ပြန်ချက်များ Contrast:
15. သူမသည်ရီပတ်ဘလီကန်မူလတန်းအတွက်မဲပေးကြဘူး, ဒါကြောင့်သူမတစ်ဦးဒီမိုကရက်ပါတီဖြစ်ရမည်။
ပထမဦးဆုံးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာတော့အဘယ်သူမျှမငြင်းခုံကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လျက်ရှိသည်။ ဒါဟာစပီကာဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းများအတွက်မဲပေးတစ်ခုပြီးသား-လက်ခံခဲ့သည်အမှန်တရားတစ်ခုရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြချက် # 13, သို့သော်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသည် - ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ကရဝုဏ်ထဲကနေတစ်ခုခု ( "သူမတစ်ဦးဒီမိုကရက်ပါတီဖြစ်ရမည်") ( "သူမသည်မဲပေးကြဘူး ... ") အခြဖို့တောင်းလျက်ရှိသည်။ ထို့ကွောငျ့အငြင်းအခုံဖြစ်ပါတယ်။
ယုံကြည်ချက် & Opinions vs. အငြင်းပွားမှုများ
၏ထုတ်ပြန်ချက်များ ယုံကြည်ချက် သူတို့တစ်ဦးအငြင်းအခုံဖြစ်လျှင်အဖြစ်နှင့်အမြင်ကိုလည်းမကြာခဏတင်ဆက်ထားပါသည်။ ဥပမာ:
16. ငါထင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ တဲ့ဆိုးရွားလှသောဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအကြမ်းဖက်လူငယ်တစ်ဦး, အပြစ်မဲ့လူ့အသက်ကိုသတ်နှင့်ဤနိုင်ငံတွင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ၏အတိုင်းအတာအသစ်တစ်ခုကိုမီးရှို့ရှိပါသည်။
ဤနေရာတွင်အဘယ်သူမျှမငြင်းခုံရှိပါသည် - ငါတို့သည် Emotion ထုတ်ပြန်ချက်များထက်သိမြင်ထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်ကြောင်းအရာကို။ အဘယ်သူမျှမကြိုးစားအားထုတ်မှုကပြောပါတယ်ဘာ၏အမှန်တရားတည်ထောင်ရန်ဖန်ဆင်းထားသည်မဟုတ်, သူတို့ကအခြားအရာတစ်ခုခုရဲ့အမှန်တရားတည်ထောင်ရန်ကိုအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ သူတို့ဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်တွေကိုအသုံးအနှုန်းတွေရှိပါတယ်။ Emotion ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အတူဘာမှမမှားသင်တန်း၏, ရှိပါသည် - အမှတ်ကျနော်တို့ Emotion ထုတ်ပြန်ချက်များမှာရှာဖွေနေကြပြီးစစ်မှန်သည့်အငြင်းပွားမှုများမဟုတ်ကြသောအခါကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်, နှစ်ဦးစလုံး Emotion နှင့်သိမြင်မှုထုတ်ပြန်ချက်များရှိသည်သောအငြင်းပွားမှုများကိုရှာဖွေဘုံဖြစ်လိမ့်မည်။
မကြာခဏဆိုသလို # 16 အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှားယွင်းနေသည်သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်တရားမဝင်ဖြစ်သင့်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြထားတဲ့အမှန်တကယ်အငြင်းအခုံ, ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသောအခြားထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။ ဒါဟာအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်တစ်ဦးငြင်းခုံ၏ယုတ္တိဖွဲ့စည်းပုံမှာကနေစိတ်ခံစားမှုနှင့်တန်ဖိုးတောင်းဆိုမှုများ disengage ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဒါဟာသွားဘာဘာသာစကားနဲ့လွဲချော်နေဖြင့်အာရုံခံရဖို့လွယ်ကူသည်, ဒါပေမယ့်အလေ့အကျင့်နှင့်အတူ, သင်ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဘာသာတရားများနှင့်နိုင်ငံရေးဖို့, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ကြော်ငြာအတွက်လာမယ့်လာသောအခါအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ခုလုံးကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစက်မှုလုပ်ငန်း, ဖောက်သည်သင်၌အထူးသဖြင့်စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဘာသာစကားနှင့်သင်္ကေတသုံးပြီးထံအပ်နှံသည်။
ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်အကျွံထင်ထက်သူတို့ကအစားသင်ရုံသင်တို့ငွေကိုသုံးဖြုန်းလိမ့်မယ်, သူတို့ကြောင့်ရဝုဏ်အပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့ကြော်ငြာဒီဇိုင်း။ သို့မဟုတ်ယုတ္တိမတန် - - သင်ဖယ်အချို့စကားလုံးများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုရန်သင့်စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်လက်ယုတ္တိမှာဘယ်လိုသွားရမလဲလေ့လာသင်ယူသောအခါမူကားအခိုင်အမာလျက်ရှိသည်အရာကိုနှလုံး, သင်ကအများကြီးပိုကောင်းအသိပေးနှင့်ပြင်ဆင်ထားစားသုံးသူဖြစ်လိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကိုကတစ်ခုခုစစ်မှန်သောဖြစ်ပါတယ် "ကျွန်မယုံ" ဟုပြောပါရန်ဆိုလိုသနညျး
Analytics နဲ့ Synthetic ဖော်ပြချက်အကြားခြားနားချက်
လောက Humanitarian သည်ကဘာလဲ?
အရီဇိုးနားကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်နှိုင်းယှဉ်
En Fait - ပြင်သစ်ဖော်ပြမှုရှင်းလင်းချက်
Alabama အဘိဓါန်ကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
က MySQL အတွက်ကော်လံအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲနည်း
သင်က Hukam Read ခင်မှာသင်သိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
Scott Clifton အကြောင်း 25 အချက်အလက်
ကွန်ဆာဗေးတစ်အကြောင်းထိပ်တန်း5ဒဏ္ဍာရီထိုအထငျမှား
Beginner တွေစန္ဒယားစာအုပ်: သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာ
အဆိုပါ Feathery: အစောပိုင်းဂေါက်သီးဘောလုံးအခုတော့ကျုံးရှားပါးစုဆောင်း
Reel ကို Maintenance စေလွယ်ကူ Spinning
Brianna Rollins: တစ်ဦးကကျားဟာ Track ပေါ်တွင်
မော်တော်ကားမိတ်ဆွေတို့ကို5ဂရိတ်လက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပြုချက်များ
Kopi Luwak (ကြောင်ကတိုးကော်ဖီ)